Oovimba bokumisela uMarian-Ukubalwa ukuya eBukumkani
Udidi Archives: Ukuphanyiswa kweMarian
ISILUMKISO ESIBALULEKILEYO SEWWIII: Thandaza imiGqibelo eMihlanu yokuQala kunye nokungcwaliswa kukaPopu.
Inenekazi lethu laseFatima lisixelele into eza kuzisa uxolo okanye imfazwe
Luz-uKumkanikazi weXesha lokuphela
UNyana wentshabalalo sele esebenza.
Ukuzinikezela kukaZwelonke kuMariya
NgoLwesihlanu, nge-1 kaMeyi, ukuBuyiselwa ngokutsha kweMelika e-Merika kwiNtombi Enyulu kaMariya
Zingcwalise kunye neNtsapho yakho kumama kaThixo
Kuba iNtombi enguMariya yayihamba eMhlabeni kwaye ibambe kwaye yathuthuzela usana olunguYesu phantsi kwengubo yakhe, abathembekileyo, abantwana bakaMariya nabo bafumene indawo ekhuselekileyo ezingalweni nasentliziyo kaMariya.
Ithetha nabo bachaphazelekayo ngosindiso lwabathandekayo. Abaninzi bandibuza, “Bawo, bantwana bam. Bawo, bantwana bam. ” Yonke imizuzu ndihleli nabantu, bandibuza malunga naloo nto. Ndimamele kakuhle. Ndicinga ukuba ngoku kufuneka sithandaze iintsapho, kufuneka siqokelele iintsapho zethu. Kodwa ingxaki wena […]